10 Goobaha Quusitaanka Ugu Fiican Dunida | Save A tareenka
Home > Safarka Iceland > 10 Goobaha Quusitaanka Ugu Fiican Dunida
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe, Safarka Iceland
Meelaha badaha dhexdooda, ka qarsoon ilbaxnimada, oo aan la taaban waqtiga, waa 10 goobaha ugu wanaagsan ee quusitaanka adduunka. Laga soo bilaabo hudheellada midabada iyo dhalaalka leh ee maraakiibta WWII, nolosha badda duurjoogta ah, iyo godad buluug ah, diyaarso qalabkaaga quusitaanka maxaa yeelay kulankaan quusitaanka wuxuu ku dhow yahay kii ugu xiisaha badnaa.
1. Goobta Ugu Fiican Quusitaanka Shiinaha: Darbiga Weyn
10 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa u safra derbiga weyn ee Shiinaha sanad walba, laakiin in yar ayaa og inay ku quusin karaan mid ka mid ah bogagga ugu caansan adduunka. Halka dadka badankood ay ku dul socdaan darbiga 21o00 km, sawirro sawirro ah oo loogu talagalay warbaahinta bulshada, Keydka Panjiakou waa goob lagu quusto biyaha hoostooda. Darbiga Weyn ee Shiinaha waa Cajiibka kaliya ee Caalamka, dhab ahaan waad ku quusin kartaa.
Ma noqon karto mid soo jiidasho leh oo qurux badan sida quusitaanka Indonesia ama Fiji, laakiin waxaa gabi ahaanba lagaa qaadi doonaa aragtida Gidaarka Weyn ee Shiinaha. Maaha oo kaliya inaad ku qanciso hareeraha xagga sare, laakiin soo helitaankeeda bilowgii, lebenkii iyo kor, dhisme taagan kumanaan sano, ka badbaado khataraha dabiiciga ah, boqortooyooyin, iyo isbadalada siyaasadeed.
Waqtiga ugu Fiican ee Quusitaanka:
Quusitaanka Darbiga Weyn ee Shiinaha waa waayo-aragnimo adag xitaa noocyada kala duwan ee horumarsan. Sababta ayaa ah heer-kul hooseeya, gaarey ugu badnaan 10 ilaa 11 ° C, at 7 mitir qoto dheer xagaaga. Sidaa darteed, waqtiga ugu fiican ee lagu quusto Darbiga Weyn waa marka aad si fiican u diyaar garowdo. Shuruud dheeri ah ayaa ah ugu yaraan la dhammaystiray ee 100 si ay u 200 quusto dadka madadaalada kaladuwan.
2. Goobta Ugu Fiican Quusitaanka ee Boqortooyada Midowday (UK): Wales
Oo leh godad, 500 burburay, iyo nolosha badda ee cajiibka ah, xeebaha wales waa bar layaab leh oo lagu quusto. Halkan waxaad ku quusin kartaa in ka badan 50m biyaha Skomer, iyo Skokholm, iyo jasiiradaha Middleholm. Muuqaalka ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican aagga, kuu ogolaanaya inaad ku qanciso nolosha quruxda badan ee badda isla markaana aad ogaato burburka WWII haddii aad taariikhda ku jirto.
In kasta oo aragtida hurdo ee ay leedahay, Wales runtii waa meel qurux badan oo lagu quusto oo ku taal Yurub. Tusaale ahaan, Keydka Skomer Marine ee ku yaal Pembrokeshire waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu quusto ee Wales: kalluun, hoonbarrooyinka, slugs-ka badda iyo guntimaha badda, waa uun qaar ka mid ah xayawaanada badda ee aad la kulmi doonto.
Iyadoo 20 dhibco quusid kala duwan, Portofino waa in ka badan a magaalo qurux badan oo ku taal Yurub. Waxaa intaa dheer guryaha soo jiidashada leh, maqaayado, iyo xeebaha, xeebta Ligurian waa goob qurux badan oo lagu quusto Yurub.
marka hore, Reserve-ka Portofino Marine Reserve wuxuu siiyaa tafaariiqyo iyo burburin la yaab leh bilowga iyo noocyo horumarsan. Marka labaad, taalada Masiixa, Masiixa Abyss waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 5 Goobaha lagu quusto ee ku yaal Portofino. Last, laakiin ma ugu yaraan, Kanadiyada MOHAWK ee deerada burbursan waa soo jiidasho kale oo lagu quusto 20-40 mitir.
Si aad u soo gabagabeyn, Goobaha lagu quusto ee Portofino ayaa ku habboon quusitaankaaga ugu horreeya, iyo in la ogaado wax kale oo la yaab leh layaabka dabiiciga hadaad tahay khibrad quusasho.
Milan ilaa Portofino Tareen
Venice To Portofino Tareen
Florence To Portofino Tareen
Turin Ilaa Portofino Tareen
4. Goobta Ugu Fiican Quusitaanka Faransiiska: Jasiiradaha Guadeloupe ee Faransiiska
Janada Kariibiyaanka, jasiiradaha la Guadaloupe waa qayb yar oo ka mid ah jannada quusitaanka Faransiiska. Kooxdan yar ee jasiiraduhu waxay ka kooban yihiin La Grande Terre, iyo Petite Terre, hoy fulkaano, keymaha roobka, muuqaal qurux badan iyo xeebo, iyo tan ugu muhiimsanna waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu quusto Yurub.
Jasiiradaha Guadeloupe uma caan aha sida Bali ama Belize, laakiin nolosha badda ee halkan ayaa hubaal ku hayn doonta biyaha hoostiisa fasaxaaga oo dhan. Kaydka Marine Cousteau waa goobta ugu wanaagsan ee Quusitaanka Guadeloupe, oo leh fauna iyo dhir qurux badan, sugnan, godad qoolley, iyo meelo badan oo badan oo qarsoon oo loogu talo galay quusiyaha xiisaha badan, iyo kuwa ugu horreeya ee si fudud u doonaya inay ku raaxaystaan ​​nolosha badda ee biyaha Kariibiyaanka.
Waqtiga Ugu Fiican Ee Lagu Quusto Jasiiradaha Guadeloupe:
Heerkulka biyaha ayaa weli ah 23-28 ° C sanadka oo dhan Guadeloupe, markaa waxaad imaan kartaa quusitaanka markasta oo aad rabto.
5. Jasiiradaha Orkney, Scotland
Dhirta cagaaran, buuraha, iyo buuraha, Jasiiradaha Orkney waxay leeyihiin taariikhda ugu wanaagsan ee badaha adduunka. Suugaan, waxaa jira 7 maraakiibta hoose ee biyaha Orkney ee Scotland. Burburkaan ka yimid Doomaha Badaha Sare ee Jarmalka ee Scapa Flow, in 1919.
Waxaa sii dheer burburka, waxaa jira duur-joogta badda oo la yaab leh oo lagu sahaminayo biyaha nadiifka ah. Tusaale ahaan, biyaha Caqabadaha Churchill iyo Yesnaby ama Inganess ayaa ku habboon in lagu arko nolosha badda duurjoogta ah.
Waqtiga Ugu Fiican ee Lagu Quusto Jasiiradaha Orkney:
Easter ilaa Nofeembar, marka heerkulku yahay 13 ° C.
6. Goobaha Quusitaanka Ugu Fiican Yurub: Silfra, Iceland
Inta u dhaxeysa laba qaaradood, qalbiga Beerta Qaranka Thingvellir, biyaha ugu cad ee Iceland ayaa kaa sugaya khibrad quus ah oo la yaab leh. Astaamaha juqraafiyeed ee gaarka ah ee Silfra waxay bixiyaan godad qarsoodi ah iyo godad loogu talagalay noocyo kala duwan oo khibrad leh.
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan quusitaanka Silfra waa kala-baxa. Wadadan quusitaanka waxaa sameeyay sanadlaha 2 Dhaqdhaqaaqa cm ee taarikada tectonic ee Waqooyiga Ameerika iyo Eurasia. Tan waxaa markii ugu horreysay la abuuray dhulgariir ka dib, laakiin gebi ahaanba badbaado ayey u tahay quusidda maalmahan, sidaa darteed waxaad bilaabi kartaa inaad u diyaar garowdo waayo-aragnimo quusid lama ilaawaan ah oo ku saabsan biyaha Iceland.
Qoto dheerida ugu badan ee lagu qoro Silfra waa 18 mitir.
Dusseldorf ilaa Munich Tareenka
Dresden ilaa Munich Tareen A
Bonn ilaa Munich Tareen
7. Goobaha Quusitaanka Ugu Fiican Dunida: Bali
Hareeraha xeebaha bacaadka ah, macbudyo, buuraha fulkaanaha, biyaha sixirka Bali waa layaab adduunyo kaligood. Shaki la’aan, Bali waa meel aad u fiican oo fasax ah oo ku habboon quusitaanka.
Magaalada Bali, waxaad u kala qaybin kartaa waqtigaaga inta badan meelaha lagu quusto maxaa yeelay meel walba way yaalaan. Laga soo bilaabo reefs midab leh ilaa kalluunka waaweyn, iyo boholo loogu talo galay taallooyinka maskaxda ka dhaca ee Buddha, Bali hoostiisa waa adduun xiiso iyo xamaasad leh oo loogu talagalay quusitaanka iyo qoob-ka-ciyaarka.
Waqtiga ugufiican ee lagu Quusto Bali:
Maajo illaa Nofeembar waa xilliga lagu quusto Bali, iyo waqtiga ugu fiican ee la arko Manta Rays waa Abriil ilaa May.
8. Goobaha Quusitaanka Ugu Fiican Dunida: Godka Buluuga Ee Belize
125 mitir qoto dheer, qaab wareegsan, iyo muuqaal cirfiid aad u wanaagsan, goobta lagu quusto Hole Blue Hole ee Belize, waa mid ka mid ah hogaanka 10 waa in lagu qoro goobaha adduunka. Godka weyn wuxuu ku toosan yahay Lighthouse Reef ee Belize, iyo aragti wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad isku aragto nolol quus ah oo aan la ilaawi karin.
Si ka duwan bogagga kale ee ugu wanaagsan ee liistadayada, Guriga Buluugga ah hoy uma ahan farshaxanno Balinese ah, nolosha naadir ah, ama dhagaxaan midab leh. Waxa aad heshay waa khibrad quusasho iyo rayn rayn leh, taasi waxay kuu kaxayn doontaa heerka quusitaanka xiga.
Waqtiga Ugu Fiican Ee Lagu Quusto Godka Buluugga ah:
Abriil ilaa Juun ayaa ugu fiican kalluumeysatada nibiriga daawashada iyo quusitaanka.
9. Raja Ampat |: Quusitaanka Dhamaadka Dunida
Ka fog ilbaxnimada ilaa 2004, Raja Ampat waa janno qarsoon, oo kuyaala inta udhaxeysa Indonesia iyo Australia. Mahadsanid daahfurkaan daahsoon, duurjoogta badda ee Raja Ampat waa mid ka mid ah duurjoogta adduunka.
Markaad quusato Raja Ampat, waad ogaan doontaa 600 noocyada kalluunka adag keligood, marka lagu daro nolosha badda ee midabbada iyo dunidan ka baxsan. Adduunyadan gaarka ahi waxay ku taal bartamaha 4 jasiiradaha waaweyn: Waigei, Batanta, Salawaati, iyo Misool ee galbeedka Papua fog.
Haddii aad dhexdhexaad ka tahay quusitaanka sare, markaa waa inaad hubaal ka dhigato fasaxaaga soo socda ee lagu quusto Raja Ampat.
Waqtiga Ugufiican ee Lagu Quusto Raje Ampat:
Noofambar illaa Abriil oo leh heer kul kulma 27 si ay u 30 ° C.
10. Meelaha Ugu Fiican Quusitaanka Shiinaha: Shi Cheng Magaaladii Hore ee Harada Qiandao
Qoto dheer oo ku taal kun Lake Islands, ee gobolka Zhejiang, ah magaalada qadiimiga ah ee Shi Cheng been ah. Qoto dheer ee 40 mitir, waxaad ogaan doontaa waxyaabaha yaabka leh ee magaalo Shiinaha ka lumay. In kasta oo biyaha kulul iyo waqtiga la dhaafay, astaamaha dhismaha ee magaalada, iyo xitaa faahfaahinta alwaaxda ayaa si fiican loo ilaaliyaa.
Sababahan awgood, magaalada Shi Cheng waa janno qarsoon oo loogu talagalay dadka kala duwan. Kuwo badan ayaa u yimaada si ay u ogaadaan quruxda harada Qiandao, laakiin magaaladan lumisay waa hal sabab oo kale oo layaableh oo lagu safro. Magaalada iyo dooxada ayaa lagu soo fatahay 1959, laakiin gebi ahaanba waa badbaado u quusitaanka.
Waqtiga Ugu Fiican Ee Lagu Quusto Shi Cheng:
Dhicid, mahadsanid cimilada qalalan ee diirran.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawinno qorsheynta safar lama illaawaan ah oo ku saabsan 10 goobaha ugu fiican ee quusitaanka adduunka tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "1o Meelaha Ugu Fiican ee Quusitaanka Adduunka" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-diving-sites-world%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad u beddeli kartaa / ru ilaa / fr ama / es iyo luqado badan.